အကြောင်းမလှသူတို့နှင့် .. စကားလက်ဆုံကြခဲ့ခြင်း …( ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အကြောင်းမလှသူတို့နှင့် .. စကားလက်ဆုံကြခဲ့ခြင်း …( ၂ )
အကြောင်းမလှသူတို့နှင့် .. စကားလက်ဆုံကြခဲ့ခြင်း …( ၂ )
Posted by fatty on Dec 1, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |7comments
မပြီးခင်မြန်မာ မမြင်စေနဲ့ .. ဆိုရိုးစကားလဲရှိပါသဗျ ..။ အခုလဲမပြီးခင် မြန်မာတွေမြင်ကုန်တော့ … ကျနော် အခန်းနဲနဲ ကျော်ရေးရတော့မှာပါ …။
မကြည်ပြာရဲ့ ဓာတ်ပုံကိစ္စလေးပါ ..။ အယ်ဒီတာများကတော့မြင်တတ်တာပေါ့ဗျာ ဒီပုံဟာ သူ့ရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပါ။ .. မကြည်ပြာဟာ သူဒီလို ..သူများတွေကို
နှိပ်ပေးရတဲ့ ဘ၀ နဲ့ ကျောင်းစားရိတ်ရှာနေရတာကို လုံးဝ မညီးညူပါဘူး ..။ ကျောင်းကဆရာတွေ ဆရာမတွေကလည်း အကုန်သိပါတယ် ၀ိုင်းဝန်းပြီးလဲကူညီကြပါတယ်။
သူ့ကျောင်းစားရိတ်သာမက သူမဟာ အိမ်ကိုလဲထောက်ပံ့နေရပါတယ်။ အဖေက ကြယ်ငါးပွင့်သဘောင်္ ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားပါ ။ သိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်က ပို့ကုန်
တွေကြသွာတော့ သဘောင်္က အခေါက်မှန်မှန် မထွက်နိုင်တော့ဘူးလေ …။ သဘောင်္ပေါ်မှာ တင်ရမဲ့ကုန်ရှိမှ အလုပ်သမားတွေက အလှည့်နဲ့ အလုပ်ရကြတာမို့လား။
အမေက နေ့ပြန်တိုးနဲ့ဈေးရောင်းတယ် …။ အရောင်းအ၀ယ်ကမကောင်းလှဘူး ..။ မကောင်းတာတော့မပြောနဲ့တော့ အရင်ကငွေတိုးချေးသူတွေဟာ …
တလကို အလွတ်ဆိုရင် ၁၅ ကျပ်ထိရကြပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အနေအထားမှာတော့ .. အလွတ်ကို ၃ ကျပ်တိုး ဘဲရပါတယ်။ ဒါတောင် တချို့ဆိုရင် ၃ ကျပ်တိုးကိုမပေးနိုင်
အဲ မကြည်ပြာ အကြောင်းနဲနဲဆက်ကြရအောင် … ကျနော်တို့ရန်ကုန်မှာ ဂျပန်လူမျိုး တယောက်ကနေ မျက်မမြင်တွေအတွက် အနှိပ်ပညာ သင်ပေးခဲ့ပြီး မျက်မမြင်များ
အနှိပ်ခန်း ဖွင်ပေးထားတာရှိပါတယ် …။ တချို့လှုချင်သူများကလည်း အဲဒီကို သက်သက်သွားပြီး အနှိပ်ခံလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီိအတိုင်းသွားပြီး ကျနော်လှုခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူတို့ လက်မခံပါဘူး ….။ သူတို့နှိပ်တာကို ခံယူပါ .. အကြောဖွင့်ပေးခြင်း လေဖွင့်ပေးခြင်းမို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်တဲ့ သူတို့ပညာကို မယုံလို့လားလို့
ဆိုသဗျ။ ….. မကြည်ပြာ ကလည်း လာတဲ့ဧည့်သည်များကို သန့်ရှင်းစွာနဲ့ နင်းနှိပ်ပေးပါတယ် ။ နှိပ်နေရင်းနဲ့လည်း စကားတွေပြောဖြစ်ကြပါတယ် …။
သူတို့အနှိပ်ခန်းမှာ ခုနက ကျနော် သန့်ရှင်းစွာနင်းနှိပ်ခြင်းလို့ သုံးနှုန်းခဲ့တယ်နော် …။ တချို့က လာတဲ့ဧည့်သည်ကို နှိပ်ရင်းနဲ့ မထိခလုပ်ထိခလုပ် လုပ်ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ အပိုငွေ ဘောက်ဆူးပေါ့ .. အဲဒါ ကို မျိုးမျိုး မျက်မျက်လေး ရဖို့ပါ။ အဲ သူတို့အောင်မြင်သွားရင် ဘောက်ဆူးက လေးငါးထောင်ရတတ်ပါတယ်။
တချို့ကြတော့လဲ လာတဲ့ဧည့်သည် ကိုယ်တိုင်က ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာကြသူတွေလဲရှိပါတယ် …။ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတဲ့သူတွေက … အများအားဖြင့်ကျောက်အောင်သူတွေ
တချက်ချက်နဲ့ပွပေါက်တိုးခဲ့သူတွေ ငွေကိုပြစ်ပေးနိုင်သူတွေပေါ့ …။ မိန်းကလေးတွေကို အနှိပ်ခံရင်း သူတို့သဘောကျရင် ငွေထုတ်ပြပြီးဆွယ်တာပေါ့လေ …။
မကြည်ပြာတို့ အလုပ်မှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာ အပြင်ထွက်ခွင့် လွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူး …။ ဧည့်သည်က by name နဲ့လာရင် အခေါ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးက
အလုပ်ဝင် …။ by name နဲ့ မလာရင် ဧည့်သည်အရနဲတဲ့မိန်းကလေးကို manager ကကြည့်ပြီးထည့်ပေးရပါတယ် ..။ မကြည်ပြာကတော့ ကျောင်းသူမှန်းသိလို့
အပြင်ထွက်ခွင့်ရပါတယ် … အပြင်မှာ computer သင်တန်းတက်တာ basic တောင်ပြီးသွားပြီတဲ့။ internet တော့မသုံးတတ်သေးပါဘူးတဲ့ ..။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကဘဲ final exam ပြီသွားပါပြီတဲ့ ….ဒီလတော့ အိမ်ကိုမထောက်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ …။ ၂ ဘာသာ ကောင်းကောင်း မဖြေနိုင်လို့ ဆရာဆီမှာ
ခုံနံပါတ် တော့ပေးထားတာဘဲ … ပြောပါတယ် ..။ သူခုံနံပါတ်ပေးထားတဲ့ဆရာကလည်း တချိန်က ကျနော့ ဆရာပါ ..။ general management , marketing , leadership ,… problem solving … အဲဒါတွေကို ခေတ်နောက်မကျအောင်ကျနော်တို့ကလည်း တက်ထားရတာကိုး ..။ အော်ကြုံတုန်းမို့ ကျနော်တို့ computer
စသင်ရတော့ computer မှာ mouse ဆိုတာမရှိသေးဘူး ပေါ်သေးဘူးဗျ ။ key board နဲ့ဘဲ အကုန်လုပ်ရတာ ။
တခုကျနော်ပြောချင်တာကတော့ … အနှိပ်ခန်းတွေမှာ ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး … ဒါကြောင့် လာတဲ့ဧည့်သည်က ငွေနဲ့ဆွယ်ပြီး သူတို့ကို ခွင့်ယူခိုင်း
အပြင်ရောက်မှ တည်းခိုခန်းသွားကြတာပါ …။ ကျနော်တို့မြို့နယ်မှာ အနှိပ်ခန်း စုစုပေါင်း ၃၅ ခု ရှိပါတယ် ..။ တခန်းကို ပျှမ်းမျှ မိန်းကလေး ၂၀ နဲ့ အထက်ရှိပါတယ် ..။
လုပ်ငန်းပမာဏမှန်းကြည့်လီု့ရတာပေါ့ …။ အနှိပ်ခန်း ဆိုပေမဲ့လဲ … ingo တွေက အလုပ်လုပ်သူ မိန်းကလေးများကို လိင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ပညာတွေ ပေးထားတာကို
တွေ့ရပါတယ် ..။ ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်းလဲ သူတို့နားလည်ကြပါတယ် …။ ….ကဲ နောက်တခါမှ ဆက်ချင်လဲဆက်အုံးမယ် .. မဆက်ချင်လဲမဆက်တော့ဘူး။
ကိုဖက်ငွေတိုးကအလွတ် ၃ ကျပ်တိုးဆိုရင်ယူမယ့်လူတွေ
အကို့ ရဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ကိုတော့လေးစားတယ်ဗျာ….။
– မြန်မာပြည်မှ အနှိပ်ခန်းဟာ တရားဝင်လိုင်စင်ပေးပြီးလုပ်နိုင်တာလား..။
ယူအက်စ်မှာတော့ ..(မြန်မာပြည်လိုအနှိပ်ခန်းတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ) သာမန်အားဖြင့်.. အနှိပ်သည်ဟာ ..လူအ၀င်အထွက်များတဲ့ ရျောပင်းမော လူသွားနေရာဘေးတင်.. လူရှေ့ သူရှေ့ နှိပ်နေကြတာတွေု့းပါတယ်..။ မျက်နှာမှောက်ချလို့ရတဲ့ ခုံကလေးနဲ့ ..ဒီအတိုင်းကျောထောင်း..။ဇက်ကျောဆွဲနေကြတာပါပဲ..။
ခြေအနှိပ်သည်လည်း…. မှန်လုံခန်းထဲ အတွင်းအပြင်တိုးယိုပေါက်မြင်ရတဲ့နေရာ လုပ်တာတော်တော်များပါတယ်..။ အဲဒီမှာ ခြေသည်းလက်သည်းပါအလှပြင်တာမို့ .. အမျိုးသမီးတွေလုပ်နေတာ များပါတယ်..။
အခုမြန်မာပြည်ရဲ့ အိပ်ယာအပြင်အဆင်။ အခန်းမီးမှောင်ချပုံနဲ့.. ကြိုပြင်ဆင်ထားသလို မဖြစ်နေဘူးလား..။
– အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေထဲ .. အငယ်ဆုံးက အသက်ဘယ်လောက်ပါလဲ..
– ဒီအလုပ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ၀ါသနာပါလို့လုပ်ကြတာလား..။ ငွေအရလွယ်လို့ လုပ်ကြတာလား..။
– စက်ချုပ်သမတွေဟာ ..နယ်တွေကလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာမှာ .. ဆန်ရှင်ကြောင့် စက်ရုံပိတ် .. အလုပ်ပြုတ်ပြီး ..အခုလိုဘ၀ရောက်တာ ..လူသောင်းချီတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်..။အဲဒါတကယ်ပါလား..။
တရုတ်ပြည်က အနှိပ်ခန်းကလဲ ကိုခိုင်ပြောသလိုပါပဲ … တစ်ကိုယ်စာလှဲနိုင်တဲ့ ကုတင်နဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာပဲ နှိပ်ကြပါတယ် … ဟိုတယ်တွေမှာလဲ အနှိပ်ခန်းတွေရှိပါတယ် … ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်ခန်းမဟုတ်ပါဘူး … မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအတူတူသွားပြီး အနှိပ်ခံရင်း စကားပြောနေကြတာတွေပဲ ကြုံဖူးပါတယ် …
ကျန်တာကတော့ ကျွန်မမသိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် …
အခုပြတဲ့အနှိပ်ခန်းက စုံထောက်ကြီးအာဂလို အဖြေရှာလိုက်ရရင်ဖြင့် ………. ………… ……………… ………….
ကျနော်ရေးတာတွေ နဲနဲ ကျန်တာတွေရှိသွားပါတယ် ခွင်လွှတ်ပါ ..။ ကျနော်က စာရိုက်နှေးတော့ ..ဟဲဟဲ .. စားရိတ်နဲနဲထောင်းလို့ပါ ..။ မြန်မာပြည်မှာ .. တိုင်းရင်းဆေးကုခန်းနဲ့ အနှိပ်နဲ့တွဲပြီး တရားဝင်ခွင့်ပြုတာဘဲရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ယောကျာင်္းအချင်းချင်း မိန်းမအချင်းချင်းဘဲနှိပ်ရပါတယ် ။ တန်းစီ ၇တာ ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိပါမယ် တရက်ကို။
ကျန်တာကတော့တရားဝင်မဟုတ်ပါ။ အပြင်မှာခုံချပြီးနှိပ်တာကတော့ လူစီတဲ့ကားပွဲစားတန်းတို့ဘာတို့မှာရှိပါတယ်။
ပန်းဆိုးတန်းတံတားအောက်မှာဆို နားကလော်တဲ့သူနဲ့ နှိပ်တဲ့သူတွေ ခုံချထားပါတယ်။ ကျနော့လက်တွေ့ တဦးကတော့ တူလေးပါ .. နှခေါင်းထဲက အရည်တွေ ပုတ်ပြီးကျနေတာ နားနှခေါင်းဆေးရုံ ၂ ခေါက်သွားတာ
မပျောက်ပါဘူး … သူတို့ဆီရောက်မှ နှာခေါင်းထဲကိုနှိုက်တာ ခဲဖျက် အသေးလေးထွက်လာပါတယ်။ တချို့ဆရာဝန်များကိုတိုင် သူတို့ကိုချီးကျူးကြပါတယ် ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေါ့။ ဒီက အနှိပ်ခန်းတွေကလဲ တယောက်ခန်းတော့မရှိပါဘူး အများခန်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း လာသူနဲကုန်ပါတယ် စီးပွါးရေးကြောင့်ပေါ့
ဒီတော့တယောက်ချင်းပုံစံဖြစ်သွားပါတယ် ..။ အသက်အငယ်ဆုံး ၁၆ နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်..။
အထည်ချုပ်စက်ရုံပိတ်လို့ရောက်တာ နဲနဲရှိပါတယ်။ အခုတော့ အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိလဲ လစာကွ့ာပါတယ်။ စက်ရုံမှာ
တနေကုန်လုပ်မှ ၂ သောင်းလောက်ရတာ ကိုး .. တကဲ့လက်တွေ့ဘ၀မှာ အငတ်သာခံမယ်ဟေ့ အချောင်တော့မလိုက်ဘူး … ဆိုတာ နဲနဲတော့ရှားပါတယ် … ချမ်းသာနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေသာအဲဒီစိတ်ထားမျိုးတွေရှိရင် …မြန်မာပြည်ဒီအတိုင်းဖြစ်မနေပါဘူး …။ ၀ါသနာအရလုပ်သူ တယောက်ဘဲတွေ့ဘူးပါတယ်။ သူကနှိပ်ရင်း အကြောတွေအကြောင်း တိုင်းရင်းဆေးအကြောင်းတေါရှင်းပြနေတော့တာဘဲ။